Naya Post Nepal | गोहोरोमाथि ब’ला’त्का’र, मोबाइल भिडियोबाट कसरी सार्वजनिक भयो घ’ट’ना ?
गोहोरोमाथि ब’ला’त्का’र, मोबाइल भिडियोबाट कसरी सार्वजनिक भयो घ’ट’ना ?
भारतको महाराष्ट्रको सह्याद्रि टाइगर रिजर्भमा एक बंगाल मोनिटर लिजर्ड (गोहोरो) माथि ब’ला’त्का’र”को घ’ट”ना सार्वजनिक भएको छ । यो सिलसिलामा चार व्यक्ति’वि”’रु’द्ध आ’शं’का”को आधारमा मु”द्दा दर्ता गरेर अ’नु’स’न्धा”न अघि बढिरहेको छ ।
यी चार वि’रु”द्ध ३१ मार्चमा चन्दोली नेशनल पार्कमा अ”वै’ध तरिकाले प्रवेश गरेको आ”रो’प’मा मु’द्दा द’र्ता गरिएको थियो । यो पा’र्क टाइ’गर रि’जर्भअन्तर्गत पर्दछ । अधिकारीले मु”द्दा दर्ता गरेपछि यी अ’भि”यु’क्तको मोबाइल फोन अ’नु’स’न्धा”न गर्दा गो’हो’रोमाथि भएको घ’ट”ना”बारे पत्ता लागेको हो ।
सह्या’द्रि टाइगर रिजर्भ महाराष्ट्रका चार जिल्ला सतारा, सांगली, कोल्हापुर र रत्नागिरीमा फैलिएको छ । ब’ला’त्का”र”को घ’ट”ना रत्नागिरी जिल्लाको गोठणे गाउँको बताइँदैछ ।
के हो घ’ट’ना ?
चन्दोली नेशनल पार्कमा बाघको गन्तीका लागि ट्र्या’प क्यामरा राखिएका छन् । यी क्यामराको निरिक्षणको क्रममा गोठणे गाउँको एउटा इलाकाबाट एउटा क्या’म’रा गायब भएको पत्ता लाग्यो । तर त्यसको अगाडि राखिएको अर्को क्यामराबाट केही संदिग्ध व्यक्तिलाई देखियो । यी मानिस शिकारमा प्रयोग हुने हतियार लिएर गइरहेको देखिए । ।
त्यसपछि उनीहरु”वि’रु’द्ध मुद्दा दर्ता गरियो । अ’नु’स’न्धा”न गर्ने समूहले एकजना सं’दि’ग्ध’लाई प’क्रा”उ गरेको भन्ने खबर मिडियामा प्रकाशित भयो । उनले आफू शिकारका लागि व’न्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताए । पछि यसै मामिलामा अन्य दुईलाई प’क्रा”उ गरियो । यो मामिलामा हालसम्म चारजना पक्राउ परेका छन् ।
वन अधिकारीले त्यसपछि सं’दिग्ध’को मोबाइल फोन अ’नु’स’न्धा”न गरियो जसमा खरायो, हरिण, पेगोलिनजस्ता थु’प्रै जनावरका तस्बिर भेटिए ।साथै, अधिकारीले एउटा यस्तो भिडियो पाए जसमा साढे चार फिट लामो एउटा गोहोरोमाथि अप्राकृतिक अ’त्या”चा”र गरिँँदै थियो ।
वन अधिकारीलाई यो वि”’भ’त्स”’ व्यवहार यिनै सं’दिग्ध व्यक्तिले गरेका हुन् कि भन्ने आ”शं’का छ । य’द्य’पि, चन्दोली नेशनल पार्कका फरेस्ट रेन्जर नन्दकुमार नलवडेले यी व्यक्तिले अहिले शिकारको कुरा स्वीकार गरेको तर गोहोरोमाथि अ’त्या”चा’रको कुरा अ’स्वी’का’र गरिरहेका छन् ।
रेन्जरले बताए कि यो भिडियो साइबर प्रहरीलाई सुम्पिइएको छ जसले भिडियोको सत्यताको अ’नु’स’न्धा”न गरिरहेको छ । अधिकारीले बताए अनुसार अवैश प्रवेशमा दोषी पाइए उनीहरुलाई ५ लाख भारु ज’रि”वाना र ७ वर्षसम्म सश्रम का”रावा’सको सजाय हुनसक्छ ।
तर नलवडेका अनुसार गोहोरोमाथि अ’त्या’चा’रको दो”षी पाइँदा उनीहरुलाई १० वर्षसम्मको जेल’ सजाय हुनसक्छ । चारजना संदिग्धलाई ८ अप्रिलमा अदा”लतमा पेश गरि’यो जसले उनीहरुलाई २२ अप्रिलसम्म १५ दिनको न्या’यि”क हि’रा”सतमा पठाएको थियो । यद्यपि, केही शर्तअन्तर्गत ज’मा’नत दिइएको थियो ।
२०७९ बैशाख ४, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 1841 Views